धरानमा रुखको भ्यू टावर बन्ने !::Hamro Koshi Awaj / awaz
धरानमा रुखको भ्यू टावर बन्ने !
जङ्गलको बीचमा होमस्टे, अर्गानिक स्वाद अनि ‘इन्जोय’ (भिडिओ)
धरानः धरानको पत्राङ्बारीस्थित सालघारी भिरालो जमीन । त्यही जमीनबाट धरान, कोशी नदीलगायत तराईका समथर भूभाग देखिन्छ । त्यही ठाउँमा शुरुवात भएको छ होमस्टे ।
धरान–४ का मङ्गलसिंह आङबुहाङ (लिम्बू) ले त्यहाँ होमस्टे पनि सञ्चालन गरिसकेका छन् । अहिले दुईवटा होमस्टेका लागि सानो घर (हे.तस्वीर र भिडिओ) समेत निर्माण भइसकेको छ ।
होमस्टेले स्थानीय रहनसहन र संस्कृतिलाई नजिकबाट बुझ्ने मौका दिलाउँछ । त्यसो त होमस्टेको छुटै विशेषता पनि छ । आनन्द र मज्जा छ । फरक महत्व छ । किनभने होमस्टेमा पुगेपछि कृषिका ज्ञान, गाउँले रहनसहनलाई नजिकबाट साक्षात्कार गर्न पाइन्छ । त्यस्तै, यसमा आत्मियता पनि मिल्छ । अर्गानिक स्वाद चाख्न पाइन्छ । एउटै परिवार जस्तै भएर बस्न सकिन्छ होमस्टेमा । त्यसैले बिदामा कतै घुमघामको योजना बनाइरहेकाहरुलाई होमस्टे राम्रो विकल्प हो ।
उनले यी दुईवटा घरचाहिँ अहिले तत्कालका लागि निर्माण गरेको र भविष्यमा ट्री हाउस निर्माण गर्ने र पर्यटक आकर्षित गर्ने योजना रहेको सुनाए । ‘रुखमै २० वटासम्म घर निर्माण गर्ने योजना छ’, उनले भने, ‘अलिक फरक तरिकाको होमस्टे तयार गरेर पर्यटक भित्रयाउँछु ।’
कृषि पर्यटनमार्फत् पर्यटक आकर्षित गर्ने उनको योजना छ । ‘अब म कृषि पर्यटनमार्फत् पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको छु’, उनले सुनाए, ‘यही उत्पादन हुने हरियो सागसब्जी, लोकल कुखुरा, कडकनाथ, टर्की, बङ्गुरको मासु चखाउने योजना छ ।’
रुखमै भ्युटावर निर्माण गरेर पर्यटक तान्ने लक्ष्य
ग्रामिण भेगमा होमस्टेको प्रचलन बढ्दो छ । स्थानिय पर्यटन प्रवर्द्धनमा यसले राम्रो सहयोग पनि पु¥याउँदै आएको छ । खासगरी व्यवस्थित होटल, लज नभएको स्थानमा होमस्टे राम्रो विकल्प हो ।
उनले भविष्यमा त्यहाँ भ्यूटावर निर्माण गर्ने योजना रहेको सुनाए । ‘खासमा यहाँबाट तराईका समथर भूभाग, सप्तकोशी, धरानको रमाइलो दृश्यावलोकन गर्न पाइन्छ’, उनले भने, ‘भविष्यमा भ्यू टावर निर्माण गरिनेछ, त्यो पनि त्यही जङ्गलमा लहरिएका रुखमै ।’ उनले आफ्नो जमीनमा रहेका जङ्गलभित्र रुखहरु हुर्किरहेको र तिनै रुखको सहारामा फरक किसिमको भ्यू टावर निर्माण गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । ‘जङ्गलमा भएका रुख रुखबाटै चढ्ने, ओर्लने र रुखको टुप्पोसम्म पुगेर धरानलगायत अन्य ठाउँ नियाल्न सकिनेछ ।’ उनले भने ।
यहीबेला कृषि खेती प्रणालीलाई मात्र देखाउन आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुको ध्यान केन्द्रीत गर्न सकेको खण्डमा आर्थिक आम्दानी मनग्य हुने उनी बताउँछन् । उनले त्यहाँ व्यवसायिक तरकारी, माछापालन, नर्सरी शुरु गर्ने योजनामा रहेको सुनाए ।
धरान ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक पर्यटनका रुपमा अथाह सम्भावना बोकेको सहर हो । यहाँ अहिले विभिन्न ठाउँमा होमस्टे पनि सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यसमध्ये यो फरक किसिमको होमस्टेले धरानलाई एग्रो टुरिजमका रुपमा विकास गर्न सहयोग पुगेमा यहाँको पर्यटन फस्टाउनेछ ।